Zingakanani iindleko zokuhanjiswa kweposi entsha eUkraine? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Zingakanani iindleko zokuhanjiswa kweposi entsha eUkraine?
Ungaya kwiwebhusayithi yeMeyile eNtsha, ucofe i-quot; Emva koko faka idatha yothumelo lwakho kwaye uya kunikwa isixa sesothutho. Ubuncinci be-17 UAH Kodwa ngokubanzi, ngandlela ithile ngandlel kancinci kwaye andiyiqondi ukuba ixhomekeka phi.
Zininzi izinto ezimisela iindleko zokuthumela ipasile ngeposi entsha eUkraine. Cinga ngezinto eziphambili:
indlela (umgama wayo, njl. njl.);
ubunzima bokwenene kwepasile;
uhlobo lokuhambisa (isebe-isebe, idilesi yedilesi, njalo njalo);
uhlobo lokumka (iipasela kunye nemithwalo, amaxwebhu, amavili kunye namavili ngaphezulu);
ubukhulu bephakheji (ubude, ububanzi, ukuphakama);
ukupakishwa kweenkonzo ezongezelelweyo kunye nokubuya kokuhambisa;
iindleko ezichaziweyo zokumka (ukuba zingaphezulu kwama-300 UAH, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini eyongezelelweyo).
Ixabiso lokuthumela iipasile yinkonzo yePosi eNtsha:
Nceda nceda! Yonke idatha ithathwe kwiwebhusayithi esemthethweni yale nkampani kwaye isebenza ngokusemthethweni nge-01 kaFebruwari ka-2016. Ukubala iindleko zokuthumela ipasile yakho, landela eli khonkco, faka yonke idatha eyimfuneko kwaye unokufumana ixabiso lokuthumela.
Awunakho ukunika impendulo elula kulo mbuzo, kuba iindleko zokuhanjiswa zixhomekeka kwizinto ezininzi:
umgama phakathi kwezixeko, indlela yokuhambisa,
ukujolisa ekuziseni (kwisebe okanye ukuhanjiswa kongezwe),
Ubungakanani beparcelisi kunye nobunzima
Uhlobo lwento yeposi (umthwalo oxabisekileyo-ongabalulekanga, onobuthathaka okanye ongabalulekanga).
Ukwenza lula, sebenzisa ikhowudi yokuhanjiswa kweposi kule ndawo. Apho ungafaka khona amagama ezixeko zokuhamba kunye nokuhanjiswa, kunye nenye idatha yepasele.
Ndiza kulungisa. Inani elincinci lokuhambisa li-17 UAH. Ayinamsebenzi ukuba zingaphi iigram ezingxoweni yakho. Kwaye ukuba bungakanani ubunzima obusasaza oku, ngokungathandabuzekiyo, andazi
Uluhlu lokuhanjiswa kwiPosi eNtsha alunandaba, akunandaba ukuba ngowasiphi isixeko osithumela naphina e-Ukraine - ixabiso liya kufana.
Konke kuxhomekeke kubunzima kunye nobukhulu bephakeji ngokwayo. Iphariphothi esemgangathweni kwiNovaya Poshta isephezulu yeekhilogrem ezintlanu, okwangoku ngo-2016 ukuya ku-2017 indleko ezingama-35, ndazi-odola ngokwam kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo.
Kodwa, ukuba unemithwalo enkulu ngakumbi, ke apha, kuya kufuneka ufake isicelo sokubala, kwaye oku kubala ukuba ukuhanjiswa kuyakubiza malini. Ukwenza oku, yiya kwiWebhusayithi entsha yaseMajukujukwini kwi-quot; ukubalwa kokuthumela ukubalwa; icandelo, okanye umane uye kweli phepha kwaye ufake zonke iiparameter, ke ngoko ikhawuntari iyakubonisa ukuba ukuhambisa kuya kuhlawula malini.
Kwakhona, iindleko zixhomekeka kuhlobo lokupakisha, ukuba uthumela ipakethi ekhethekileyo enophawu, kuya kufuneka uhlawule okongeziweyo, ngoku ibhokisi elincinci lama-20 * 20 lixabisa ii-h hpnias eziyi-5, kwaye iphakheji (ipasile) isimahla, kodwa ungapakisha yonke into kwiphakheji yakho, emva koko iphakheji nayo ziya kubiza mahala.
Kodwa, ukuba uthumela ipasile ngekheshi xa uziswa, i-imeyile entsha nayo ithatha ikhomishini kwi-Cash on Delivery, kwinani leepesenti ezi-3 zexabiso lemali ebhengeziweyo kwimali ekuhanjisweni.
Ukuhambisa iindleko ngenkozo enjalo eUkraine njenge-quot; mailquot entsha; Ungahlala uyibona apha.
Iindleko ziya kuphenjelelwa ziimpawu ezininzi kunye nobunzima, kunye nomgama, kunye nobungakanani kunye nohlobo lokuhamba. Ngokubanzi, ngokulandela ikhonkco eliqhotyoshelwe kum, unokubala iindleko zayo nayiphi na iphakheji.
Unokubala ngokuzimeleyo iindleko zokuthumela ipasile kwiwebhusayithi esemthethweni yePosi entsha.
Ukubala kuya kuthatha ingqalelo iiparameter ezichaziweyo (ubukhulu kunye nobunzima) bepasile, umgama wokuhamba, kunye nendlela umamkeli ayifumana ngayo ipasele kunye nodidi lwepasile.
Iinkonzo ezinikezelwe yi-qu; mailquot entsha; ayibizi kangako, kodwa kwelinye icala, iphakheji (imali okanye umthwalo) iza ngexabiso elipheleleyo kunye nokhuseleko. Kungcono ukuhlawula ngaphezulu, kwaye uqiniseke ukuba yonke into iza kufika ngexesha elibekiweyo.
Ndisebenzise iinkonzo quot; I-mailquot entsha; hayi kunyaka omnye, kwaye amaxabiso amva kunokuthiwa kabini, kodwa usebenzise wona.